Home » ကုန်ပစ္စည်းသတိပေးချက်များ » ကလေးအသုံး အဆောင်နှင့်ကစား စရာပစ္စည်းများ
နိုင်ငံ - နယူးဇီလန်
ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည် - Phil & Teds Dash v5 Stroller
ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ - -
ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ - ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း။
ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း - အဓိကပတ္တာလျော့ရဲခြင်းကြောင့် အနာတရဖြစ်စေခြင်း။
ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက် - ၁၁ - ၄ - ၂၀၁၆
PRA No. - 2017/16454
Date Published - 18/12/2017
ကုန်ပစ္စည်း - ကလေးသုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စင်
ရောင်းချခဲ့သည့်ရက်စွဲ - July 2017 – December 2017
အမည် - Jolly Jumper
အဆိုပါစင်အား တပ်ဆင်ချိန်(သို့)ဖြုတ်သိမ်းချိန်တွင် စင်ထိပ်ရှိအနက်ရောင်ဘုလုံးအား အားဖြင့်ဖိမိပါကစင်၏ ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော မူလီသည်ကျိုးပဲ့နိုင်ပါသည်။ ကလေးပြုတ်မကျရန် ထိန်းထားသောကြိုးတွင် ချိတ်ထားသော ချိတ်ကို စင်၏ကိုယ်ထည်ဖြင့်ဆက်ထားပြီးစင်ထိပ်ရှိမူလီဖြင့်သာ ၎င်းကိုယ်ထည်အားထိန်းထားပါသည်။
အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အဆိုပါမူလီပြုတ်ထွက်သွားပါက စင်ပြိုလဲနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းသည် ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှစားသုံးသူများသိရှိစေရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
Source: Australian Competition & Consumer Commission Code: 0220112711
PRA No. - 2017/16468
ကုန်ပစ္စည်း - ကလေးဂါဝန်
နံပါတ် - SKU T862090
အမည် - Mark & Spencer Plc
အဆိုပါဂါဝန်သည် စားသုံးသူများ၏ကုန်ပစ္စည်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရမှုစံချိန်စံညွှန်း (၂၀၁၇)နှင့်ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
အဆိုပါဂါဝန်တွင် အသုံးပြုထားသောပိတ်စသည် မီးလောင်လွယ်စေသည့်အတွက် ဝတ်ဆင်သူများအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင် ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှစားသုံးသူများသိရှိစေရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
Alert No. – A12/1719/17
Date Published – 18/12/2017
ကုန်ပစ္စည်း - ကလေးလမ်းလျှောက်လှည်း
တံဆိပ် - Gmini
အမည် - Monty I ကလေးလမ်းလျှောက်လှည်း
ဖော်ပြပါကလေးလမ်းလျှောက်လှည်းသည် လုံလောက်သောကြံ့ခိုင်မှုမရှိပဲ ကျိုးပဲ့ပြုတ်ထွက်နိုင်သောကြောင့် ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ ဥရောပစံချိန်စံညွှန်း EN1273 နှင့်လည်းကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းသည် စားသုံးသူများအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှစားသုံးသူများသိရှိစေရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
Source: Rapid Alert System(European Commission) Code: 0220112711
PRA No. - 2017/16469
Date Published - 21/12/2017
ကုန်ပစ္စည်း - သံလိုက်(ကစားစရာအရုပ်)
ရောင်းချခဲ့သည့်ရက်စွဲ - December 2015 – October 2017
အမည် - Rattlesnake Eggs
အဆိုပါ ကလေးကစားစရာပစ္စည်း၏အရွယ်အစားနှင့် ပါဝင်သောသံလိုက်ဓါတ်သည် သြစတေးလျနိုင်ငံ စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးကြော်ငြာအမှတ် ၅/၂၀၁၂ တွင်ဖော်ပြထားသော အရွယ်အစားနှင့် သံလိုက်ဓါတ်ထက် ပိုမိုများနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ကလေးများသည် ၎င်းသံလိုက်တုံးများအား မြိုချမိပါက ကလေးငယ်၏အူနံရံ(သို့) အခြားအစာချေတစ်ရှုးများတွင် ကပ်နိုင်ပြီး ခန္ဓကိုယ်တွင်းထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေရုံသာမက အသက်န္တရာယ်ပါထိခိုက်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းသည် ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှစားသုံးသူများသိရှိစေရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။